warkii.com » Rasmi: Filim cusub oo lagu dhawaaqaday Katrina Kaif, Ishaan Khattar iyo Siddhant mashruucooda xog kusaabsan!!
Rasmi: Filim cusub oo lagu dhawaaqaday Katrina Kaif, Ishaan Khattar iyo Siddhant mashruucooda xog kusaabsan!!
Waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay filim cusub oo la magac baxay Phone Bhoot oo ay hogaamiyaal ka yihiin Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi iyo Ishaan Khattar sidaan wada ognahay Siddhant waa atoorahii kasoo muuqday filimkii Gully Boy caawiyena ka ahaa halka Ishaan Khattar la yimid filmkii Dhadak ee isaga iyo Janhvi ku xarakeeyeen.
Jilayaashan ayaa wada hogaamin doonaan filimkaan cusub ee cabsida iyo shactirada isku dhexjirto ah (Horror-Comedy) waxaana qarash gareyaal ka ah Ritesh Sidhwani iyo Farhan Akhtar halka uu agaasime ama Director ka yahay Gurmeet Singh.
Filimkaan markii hore waxaa shaaca ka qaaday Taran Adarsh balse kooxda Filimka ayaa markii dambe si rasmi ah u shaaciyeen waxaana howshiisa la guda geli doonaa dhamaadka sanadkaan halka sanadka dambe 2021 qorshaha yahay in tiyaatarada la saaro.
Dhanka kale jilayaashan iyagaxitaa baraha bulshada ayee sawirka kowaad ee Photoshoot ahaan looga qaaday soo dhigeen ugu dambeyn Katrina Filimkeeda u dambeeyay waxuu ahaa Bharat oo 2019 la daawaday sanadkaana Sooryavanshi ayeeba xili hore la imaan lahed balse Corona ayaa hor istaagay hader November in la daawanayo ayee u badantahay.